Nigranee | » मानिसको शरीरमा किन उम्रिन्छ काँडा ? कारण जान्नुहोस् मानिसको शरीरमा किन उम्रिन्छ काँडा ? कारण जान्नुहोस् – Nigranee
मानिसको शरीरमा किन उम्रिन्छ काँडा ? कारण जान्नुहोस्
निगरानी September 22, 2019 147
काठमाडौँ /जाडोको बेला होस या तर्सेको बेला हाम्रो शरीरको छालामा ससाना विमिरा देखिन्छ जसलाई हामीले काँडा उठेको भन्छौ । यस्तो काँडा किन उठ्ने गर्छ ? त्यो भने कमैलाई थाह होला ।